(၂၃) နှစ် - နှေးကွေးစွာရွေ့လျားမှုပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခဲ့ခြင်း - ကျွန်ုပ်ဘဝ၌ယောနိအတွင်း၌ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် - မင်းရဲ့ Brain On Porn
(၂၃) နှစ် - နှေးကွေးသောသုက်ပိုးသည်ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ကျွန်ုပ်ဘဝ၌ယောနိအတွင်း၌ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်၏ DE ပြproblemနာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်အချို့ကိုသင်မြင်ဖူးကောင်းမြင်ဖူးလိမ့်မည်။ DE ဟာငါ NoFap ကိုလွန်ခဲ့တဲ့လအတော်များများကစတင်ခဲ့တာပါ။ ငါ NoFap ငါ့ကိုကယ်တင်တော်မူပြီရိုးသားစွာပြောနိုင်ပါတယ်။ ငါနောက်ဆုံးတော့အဲဒီမှာ (နီးပါး) ငါဆိုလိုတာကပြန်လည်ထူထောင်ရေးရန်။
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကပို့စ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုငါဟာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးပြီးရက်ပေါင်း ၁၃၀ နေပြီးနောက်မှာမပြီးနိုင်ဘူး။ သို့သော်ငါကာလအတွင်း EDGE အကြိမ်ပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့တယ်။ သို့သော်လည်းငါသည် EDGING အဘို့အသစ်တစ်ခုကောင်တာစတင်ခဲ့သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနောက်ဆုံးညဥ့်နက်အတူတူမိန်းကလေးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးငါ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံး Vagina မိန်းကလေးများအတွင်းငါအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ငါပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာငါ့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးမှာဒီလောက်အစွမ်းထက်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမခံစားရဘူး။ ငါဘယ်တော့မှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး၊ ငါနဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမျှမျှတတပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။
ငါ DE ကိုမူးယစ်ဆေးစွဲသည်ဟုအပြစ်တင်သည့်အချိန်ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်ညတွင်ဘီယာနှင့်ဗော့ဒ်ကာတွင်များသောအားဖြင့်အရက်မူးပြီးနီးပါးနေဆဲဖြစ်သည်။ အခုငါပြန်လည်ထူထောင်နေတုန်းပဲဆိုတာငါသိပြီ။ ငါ DE ကိုထပ်မံရနိုင်တော့မယ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချရသူမရသင့်တယ်။
DE ခံစားနေရသောမည်သူမဆို - သင်အဆင်ပြေမည်။ Just Q P ထွက်ပြီး Edging မှထွက်ပါ။ မင်းအတွက်အကျိုးမရှိဘူး၊ တိုက်တွန်းချင်တာ၊ ၎င်း၏အညစ်အကြေး! ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိ pixel ထက်အဆ ၁ သန်းပိုကောင်းမည်ဟုသင်ယုံကြည်သောကြောင့်သင်၏စွမ်းအင်ကိုအမှန်တကယ်သိမ်းဆည်းပါ။
LINK - နောက်ဆုံးတွင် DE Problem နှင့်အောင်မြင်မှု……… (ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ခံစားရပြီးလှုံ့ဆော်မှုအတွက်ဖတ်ပါ)
BY - Lakekid
ကန ဦး စာပို့ - ဘယ်နေရာမှာထဲက NoFap လုပ်ဖို့ Decieded!
အခု ၁၀ နှစ်လောက်ရှိနေပြီ (အခုအသက် ၂၃ နှစ်ရှိပြီ) ။ ကျွန်ုပ်၏မိဘများသည်အင်တာနက်ဖြင့်ကွန်ပျူတာကိုဝယ်ယူလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ငါ porn နှင့်ပတ်သက်ပြီးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအွန်လိုင်းသို့ထွက်သွားသည်။ ငါဒါကိုပြaနာတစ်ခုလို့မမြင်ခဲ့ဘူး။
ငါအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှအခုအလုပ်လုပ်တော့တနင်္ဂနွေညနေခင်းတွေလုပ်ဖို့အချိန်သိပ်မရှိဘူး၊ ပုံမှန်အားဖြင့်ငါ Hungover LOL အခါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာငါမသိဘူးဒါပေမယ့်ငါဆာလောင်မွတ်သိပ်တဲ့အခါငါ fap ဖို့ပိုများသောတိုက်တွန်း!
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလိင်ဆက်ဆံစဉ်မှာသုတ်ရည်ထွက်ပုံမပေါ်ဘူးဆိုတာသတိထားမိလာတယ်။ ငါအရက်နှင့်မူးယစ်သို့မဟုတ်မမူးသို့မဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာငါ၏အအလွန်အကျွံ fapping ၏ရိုးရှင်းအချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ပြီလားယခုငါမသေချာဘူး ဒါကြောင့်ကျွန်မ NoFap ကိုရိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါပဲ။ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာတစ်ပတ်တစ်ခါမကောင်းဘူး၊ စိုးရိမ်စရာဖြစ်စေမယ့်လူတွေလို့ခင်ဗျားကိုမေးချင်တယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်ပြတင်းပေါက်မှထွက်လာသည် ငါမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာကလေးတွေလိုချင်တယ်။ ဒါကြောင့်သုတ်ရည်လွှတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပြproblemနာရပ်တန့်သွားတယ်။ ပြည့်စုံသော Detox ဖြင့်သုတ်လိမ်းနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။